TALLAABOOYINKA LAGU NOQOTO DHAQAALIYADEED XASILAAN - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn TALLAABADA AAD UGU NOQONAYSO DHAQAALIYADEED
isha sawirka: thaiworld
Ku noolaanshaha nolol dhaqaale ahaan deggan maaha khuraafaad. Si fudud u dhig, qiyaas nolol aanad ku qasbin lacagta. Waxaa jira ku filan oo lagu daboolo biilasha. Waxaad dooni doontaa noloshan, sax? Way fududahay, baro sida loo sameeyo.
Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa talaabooyinka saxda ah iyo talooyinka ku saabsan sida aad u noqon lahayd mid dhaqaale ahaan deggan. nala joog!
Waa maxay Xasilooni Maaliyadeed?
Xasilooni dhaqaale maaha in aad taajir noqoto. Waa maskax badan. Waa gobol aad ku kalsoon tahay xaaladdaada dhaqaale. Halka aad ka bixin karto biilasha oo aad ku kaydsan karto yoolalka mustaqbalka.
Waxaa lagu gaari karaa guushan. Waxa kaliya ee ay u baahan tahay waa wakhtiga aad ku tababarto dhamaan waxaad baran doonto. Hoos waxaan ku sheegi doonaa tillaabooyinka lagu noqonayo xasillooni dhaqaale.
Akhri: 15 caado oo kaa dhigi doona inaad dhaqaale ahaan xor u ahaato
Caadooyinka/Tallaabooyinka Lagu Noqonayo Dhaqaale ahaan Deggan
Inaad noqoto mid dhaqaale ahaan deggan waa caado la baran karo sida aan u baranno xirfado kale.
Waa kuwan tillaabooyinka aad ku noqon lahayd mid dhaqaale ahaan ammaan ah oo aan si gaar ah u taxnayn.
U keydi sida Sixirka
Badbaadintu waa inay noqotaa mudnaanta koowaad. Qorshahayga kaydinta shakhsi ahaaneed waa mid aad u qosol badan. Waa biilka ugu horreeya ee aan bixiyo maalin kasta. Waxaa jira qaddar go'an oo si toos ah looga soo wareejinayo akoonkayga hubinta oo loo wareejiyo akoonkayga kaydka ah. Haddii aad tahay kharash-bixiye, isku day akoon kayd oo onlayn ah.
Xataa ha ka fikirin wax kala beddelashadan oo kaliya hubi inay dhacdo, maalin kasta iyo maalin kasta.
Khiyaamo kale oo lagu noqonayo guru wax badbaadiya waa inaad iska bixiso deynta isla markiiba. Sidan oo kale ma haysatid deymo ka soo saari doona lacag badan oo ka mid ah qorshaha kaydinta oo aad ku shaqeyn karto miisaaniyad.
Xakamaynta Kharashaadka Deggan
Tani waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee inteena badan aan la kulanno. Kharashaadka degdega ah ayaa dhaqaale xumo weyn ku ah. Cunto-baxyada aan la qorshayn, wax iibsiga onlaynka ah, iyo dukaamaysiga ayaa hoos u dhigaya kaydkeena.
Qorshee Kharashaadkaaga. Miisaaniyadda
Qorshaynta miisaaniyadaada asal ahaan waa miisaaniyadayn. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad la socoto waxa lacagtaada loo isticmaalo. Way fududahay inaad kharash garayso wax ka badan intii loogu talagalay haddii aadan runtii garanayn inta aad kharashgarayso.
Fikrad ahaan, miisaaniyadu waxay kaa caawineysaa inaad la socoto lacagtaada. Miisaaniyadu waa qalab kaa caawinaya inaad lacag ku bixiso waxyaabaha aad rabto inaad lacag ku bixiso.
Hadda waa waqtigii la bilaabi lahaa la socodka kharashyadaas. Qiimee sida aad u kharash garayso adiga oo ku xisaabtamaya inta saxda ah ee aad ku bixiso waxyaabaha daruuriga ah sida cuntada, dharka, alaabta musqulaha, gaadiidka, kirada, iwm.
Markaad ogaato sida aad lacagtaada u isticmaasho, waxaad samayn kartaa qorshe oo waxaad arki kartaa sida aad u dhimi karto. Waxyaabahan muhiimka ah waa in ay ka kooban yihiin kala badh kharashkaaga. Go'aanso haddii kharash kastaa lagama maarmaan yahay, ka saar waxyaabaha aan loo baahnayn.
Khubaradu waxay ku talinayaan in kirada/amaahda dayntaadu aanay ka badnaan 30% kharashaadkaaga bishii halka kharashyada kale ay tahay inay qaataan boqolkiiba dakhliga. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad isku daydaa inaad 10% ilaa 20% lacagta soo hadhay u geliso mustaqbalkaaga.
Tani waxay ka dhigan tahay ka dib markaad ku shubto 10 ilaa 20% xisaabtaada hawlgabka, sanduuqa degdega ah, iyo xisaabaadka kale ee kaydka, waxaad ku noolaan kartaa lacagta soo hartay. Lacagtaada geli waxyaabaha muhiimka kuu ah, kadibna iska jar inta kale.
Haddii aadan aqoon sida loo ilaaliyo kharashaadka, tani way ku caawin doontaa.
Tani waa mid ka mid ah siyaabaha lagu noqon karo mid dhaqaale ahaan deggan.
Akhri: 15 Khaladaad Maaliyadeed Ee Ugu Weyn Dadku Sameeyaan
Isticmaal nidaamka baqshadda.
Nidaamka baqshadda ayaa ilaalinaya inta lacag ah ee aad isticmaalayso.
Tusaale ahaan, saddex qiyaasood oo miisaaniyadaada ku darso maalin kasta, mid gaasta, mid raashinka, iyo mid cunto dibadda ah. Kala bax lacagtaas maalinta lacag bixinta, oo ku rid saddex baqshadood oo kala duwan.
Sidan, waxaad si fudud ula socon kartaa qaddarka ka hadhay kharash kasta. Marka lacagtu kaa dhamaato, isla markiiba waad garanaysaa. Tan, ma kharash garayso.
Haddii aad si joogto ah u xad gudubto miisaaniyadaada, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad dib uga fikirto miisaaniyadaada.
Iska ilaali Deynta
Ka fogaanshaha deynta waa mid ka mid ah siyaabaha ugu macquulsan ee lagu noqon karo xasillooni dhaqaale.
Ma haysaa kaararka deynta, deymaha gaarka ah, ama deymo kale, markaas waxaad u baahan tahay inaad bilowdo qorshe deyn baabi'inta.
Aynu tan fudud ka dhigno; Samee liiska dhammaan deymaha oo u habbo habka hadhaaga ugu yar ee sare ilaa kan ugu hooseeya. Dabadeed diiradda saar deymaha meesha ugu sarreeya.
Laga soo bilaabo dakhligaaga, soo diyaari boqolkiiba in la bixiyo bishii ama toddobaadle iyadoo ku xiran sida dakhligaagu ku yimaado. Xusuusnow in ku daristan dheeraadka ah ee miisaaniyadaada aysan meesha ka saarayn qorshaha kaydinta caadiga ah.
Geli inta aad awooddo qorshaha deynta xitaa haddii ay tahay $40-50 oo keliya. Ka bixi deynta inta ugu yar. Dabaal dag marka dayn kasta la bixiyo. Marka lacagtaas la bixiyo, dabaaldeg!
Inta badan, waxaad go'aansan kartaa lacag cusub oo aad ku kaydsato qorshaha deynta. Sii wad habkan ilaa aad ka bixiso dhammaan deymahaaga. Tani waxay qaadan kartaa dhowr sano, laakiin waa geeddi-socod lama huraan ah oo abaal-marin leh.
Dadku ma gartaan in deyntu ay adkeyneyso in ay noqoto mid dhaqaale ahaan deggan.
Isticmaal miisaaniyadaada si aad u xaqiijiso qadarka aad si raaxo leh u isticmaali karto, u haysato sanduuqa xaaladaha degdega ah, ka dibna diirada saarto sidii aad uga takhalusi lahayd deymaha. Ma dayn arday baa? Samee lacago dheeraad ah si aad uga takhalusto sida ugu dhakhsaha badan. Sababtoo ah waxaad saxiixday 10-, 20- ama 30-sano qorshe lacag-bixineed macnaheedu maaha inaadan si dhaqso ah u bixin karin deyntaada. Bixinta deyntaada sida ugu dhaqsaha badan waxay kuu badbaadin doontaa lacag mustaqbalka fog sababtoo ah waxaad bixin doontaa wax ka yar ribada.
Ka waran Mortgages?
Haddii aad leedahay deyn deyn ah, waxaad haysataa wakhti aad ku bixisid. Waxaan kugula talineynaa inaad mudnaanta siiso dhammaan deymaha kale ka hor deynta amaahda guriga. Samee bixinta amaahda guryaha laakiin u isticmaal lacag dheeraad ah deynta marka hore.
Marka aad bixiso dhammaan deymaha kale, u kaydso hawlgabka, ka dib waxaad diiradda saari kartaa inaad goor hore iska bixiso dayntaada.
Wax ka baro dhaqaalaha gaarka ah.
Xeeladdu waa tan; Inta aad wax barato naftaada, dhaqaalahaagu wuu fiicnaan doonaa.
Ka dhig dhaqaalahaaga shakhsi ahaaneed. Sidan waxaad diirada saartaa xaaladaada halkii aad ka walwali lahayd qof kale.
Barashada dhaqaalaha shakhsi ahaaneed waa mid ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee lagu noqon karo mid dhaqaale ahaan deggan. Waxaan ku noolnahay dhaqan halkaas oo aan si joogto ah isu barbar dhigno kuwa kale. Waxaa naloo sheegay inaan u baahanahay inaan u noolaano qaab nololeed gaar ah sababtoo ah waa sida ay u nool yihiin dadka guuleysta. Uma baahnid inaad si gaar ah u noolaato si aad wax u cabbirto.
Diirada saar inta aad kasbato iyo sida aad ugu isticmaali karto si aad u gaarto yoolalkaaga. Xataa haddii aadan la kulmin yoolalka dhaqaale, falanqee waxa aad qaladday oo isticmaal macluumaadka si aad u horumariso.
Akhri: 10 Majalladaha Maaliyadeed ee ugu Fiican Online Go'aannada Ganacsi ee Xog -ogaalka ah
Kordhi qiimahaaga saafiga ah.
Calaamadaha lagu garto inaad dhaqaale ahaan xasiloon tahay ayaa ah in la horumariyo qiimaha saafiga ah. Tan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la dhimo deynta, kordhinta kaydka, iyo xitaa kordhinta dakhliga.
Xisaabi saafiga qiimahaaga saddexdii biloodba mar si aad u aragto in uu korayo iyo in kale
Faham in Maalgelintaada Ugu Muhiimsan ay tahay Laftaada
Maalgelinta la hubo waa maalgashi lagu sameeyo naftaada. Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu noqon karo xasillooni dhaqaale.
Waqti geli, xoog, iyo lacag si aad naftaada ugu barato xirfadaha aad u baahan tahay. Tani waxay noqon kartaa shahaado jaamacadeed, iyo aqoon iyo xirfado kale.
Baro waxyaabaha aan si toos ah ula xiriirin shaqadaada. Loo-shaqeeyayaashu waxay rabaan shaqaale si fiican u dhisan oo wax ku biirin kara shirkad siyaabo badan. Waxa kale oo ay rabaan qof muujiya dadaalka iyo hamiga ay ku horumarinayaan naftooda.
Si taas loo gaaro, waxaa jira fasallo, buugaag, iyo agab online ah oo aad isticmaali karto si aad naftaada u horumariso.
Dhab ahaantii, horumarinta xirfadahaaga waa maalgelin wanaagsan oo kuu furaysa fursado badan oo kordhiya kartidaada shaqo-shaqo.
Sidoo kale, maalgeli caafimaadkaaga. Biilasha caafimaadku waa mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan ee lagu daadiyo kaydadka. Cunto caafimaad leh, jimicsi joogto ah, iyo hurdo ayaa aad u dheer. Xakamayso walbahaarka oo hel siyaabo aad ku nasato oo aad ku nasato.
Sideen ku noqdaa mid dhaqaale ahaan deggan? Waxaad ku bilaabi kartaa shaqo, taasi waa dadka ugu horreeya. Shaqadu maaha inay noqoto 9-5, waxay noqon kartaa shay aad jeceshahay sida tabaruc, shaqo xor ah, iwm.
Meesha ugu fiican ee aad ka bilaabi karto safarkaaga xasilooni dhaqaale waa inaad hesho shaqo bixisa dakhli joogto ah. Xitaa waxaa fiican inaad hesho shaqo aad jeceshahay.
Qabashada shaqo aad jeceshahay ayaa wax badan ka dhigaysa. Tani waxay la macno noqon kartaa in la beddelo shaqooyinka, shirkadaha, shaqada xorta ah, ama bilaabista shaqo waqti-dhiman ah.
Tani waxaa laga yaabaa inaysan u muuqan wax caadi ah, laakiin gargaarkaaga fayo-dhowrka waxaad heleysaa dakhli sare.
Samee Sanduuqa Gurmadka Degdegga ah
Dhisida sanduuqa xaaladaha degdegga ah waa hal dariiqo oo aad ku noqon karto mid dhaqaale ahaan deggan.
Sanduuqa xaaladaha degdegga ah waa hab aad naftaada uga ilaaliso waxyaabaha lama filaanka ah. Wax dammaanad qaaday ma jiraan, xataa shaqadaada. Sidaa darteed, xaaladaha degdega ah sida shaqo la'aanta ayaa laga yaabaa inay ka dhacaan meesha aad ku nooshahay laba bilood shaqo la'aan, dayactir baabuur safar aan la qorshayn.
Sanduuqa xaaladaha degdegga ah ayaa dabooli doona qaar ama dhammaan kharashyada oo ku caawin doona wakhti adag. Sanduuqa xaaladaha degdegga ah ayaa sidoo kale fududayn doona maskaxdaada isagoo ku siinaya qorshe kayd ah.
Ha ka boodin sanduuqa xaaladaha degdegga ah si aad u badbaadiso hawlgabka. Haddii aad sameyso, marka qarash weyn yimaado, waxaa laga yaabaa inaad lacag kala baxdo akoontiga hawlgabka si aad u daboosho.
Sidoo kale, ka saarida lacagta goor hore akoonkaaga hawlgabka waxay dib u dhigaysaa qorshihii kaydka waxayna sidoo kale leedahay ciqaab. Tusaale ahaan, waa inaad bixisaa 10% ganaax haddii aad hore uga baxdo 401 (k).
Intaa waxaa dheer, ka ilaali qoyskaaga ammaan adiga oo abuuraya sanduuqa xaaladaha degdegga ah, si haddii ay wax dhacaan, aad u hesho lacagta. Haddii aad leedahay xaas iyo dad kugu tiirsan, hel caymiska nolosha oo samee dardaaran.
Akhri: 40 Xigashooyinka Qorshaynta Maaliyadeed ee Dhiirrigelinta ah si loo dhiirrigeliyo 2021
Hel Qorshaha Hawlgabka
Haddii aad yar tahay, waxaa laga yaabaa inaadan wax badan ka fekerin hawlgabnimada. Laakiin waa muhiim. Hadda bilow qorshahaas hawlgabka.
Maalgelinta hawlgabku aad bay u kori doontaa haddii aad ku bilowdo 20-ka sano.
Ka bilow inaad kordhiso 401 (k) kaaga ilaa ugu badnaan kulanka shirkaddaada, haddii ay taasi diyaar kuu tahay. Taas ka dib, betka ugu fiican ayaa laga yaabaa inuu yahay Roth IRA. Samee baaritaan yar, laakiin wax kasta oo aad sameyso, hadda bilow!
Tani waa habka ugu dambeeya ee aad ku noqon karto mid dhaqaale ahaan deggan liiskan.
Intee lacag ayaad u baahan tahay si aad dhaqaale ahaan u degganaato?
Tani waa mid khatar ah. Si kastaba ha ahaatee, dadka Maraykanka ah ee ka jawaabay su'aashan ayaa lambarka ku dhejiyay $516,433, celcelis ahaan. Tani waa sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay shirkadda adeegyada maaliyadeed ee Personal Capital. Qiyaastii 20% waxay sheegeen inay u baahan doonaan in ka badan $1,000,000 si ay dhaqaale ahaan caafimaad ahaan u helaan.
Maxaa ka dhigaya qof dhaqaale ahaan deggan?
Inaad noqoto mid dhaqaale ahaan deggan waxay la macno tahay qofku inuu ka badbaadi karo kharash ka yar inta uu qaato. Waxaad awood u leedahay inaad iska bixiso waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha kuwaas oo ah cunto, hoy, tas-hiilaadyo, oo aad weli haysato lacag loogu talagalay biilasha lama filaanka ah, xaaladaha degdegga ah, iyo hawlgabkaaga mustaqbalka.
Sideen ku noqon karaa mid dhaqaale ahaan deggan?
Talaabooyinkani waxay kugu hagi doonaan xasilooni dhaqaale.
Badbaadi sida sixirka
Xakamee kharashaadka degdega ah
Wax ka baro dhaqaalaha shakhsi ahaaneed
Kordhi qiimahaaga saafiga ah
Samee sanduuq degdeg ah
Hel qorshe hawlgab
Ma jeceshahay inaad barato sidaad dhaqaale ahaan u xasiloon lahayd? Raac tillaabooyinka kor ku xusan waxaadna heli doontaa xasillooni dhaqaale.
Wax kasta oo aad sameyso, xasuusnoow inaad ka fogaato deynta oo aad sameyso sanduuq degdeg ah si aad u daboosho kharashyada aan la qorsheyn.
Wax su'aalo ah ma qabtaa? Noogu soo celi qaybta faallooyinka
15 caado oo kaa dhigi doona inaad dhaqaale ahaan xor u ahaato
40 Dhiirigelinta Qorsheynta Maaliyadeed Xigashooyinka Si Loo Sii Dhiirigeliyo
Sida Loo Codsado Baasaboor Online | Talaabooyinka Shaqeeya
Dawladaha Ugu Wanaagsan Uguna Wanaagsan Hawlgabka 2022
Shaki la'aan, lacagtu waxay lagama maarmaan u tahay nolosha. Kharashyada nolosha aasaasiga ah ayaa loo baahan yahay in loo hayo si macquul ah…
51 Cuntada Arooska & Fikradaha Cabitaanka Miisaaniyadda 2022 -ka
Wuxuu soo jeediyay, adna waxaad tiri haa! Hadda, markay maalintaada weyni soo dhowdahay, waxaad ogaataa sida ay qaali u tahay…
Sida Loo Kala Saaro Xisaabaadka Bangiyada ee Miisaaniyadda 2022 -ka
Habka ugu fiican ee aad si fiican ugu maareyn karto lacagtaada waa inaad kala soocdo akoonnada bangiga ee miisaaniyadda. Taasi waa, waxaad…
Badbaadinta lacagta marka aad tahay dhalinyaro waa adag tahay. Waxaa jira lacag aad u badan oo cunta carqaladaha sida helitaanka…